लघुकथाः तिते करेला र चिप्ले भिन्डी - Gaule News
लघुकथाः तिते करेला र चिप्ले भिन्डी
युरिका सिङ्जाली मगरको कथा
तिते करेला र चिप्ले भिन्डीको तरकारी खाने सिजन हुन्छ । एक दिन सन्तुकी आमाले तिते करेला र चिप्ले भिन्डीको तरकाली पकाउछिन् । सन्तुलाई तिते करेला र चिप्ले भिन्डी देख्दै मन पर्दैन । सन्तुले तरकारी त झन खने कुरै भएन । सन्तुलाई आफ्नी आमाले खाना खान बोलाउछिन् । आमाले सन्तुलाई एउटा थालमा भात, तिते करेला र चिप्ले भिन्डीको तरकारी राखेर दिन्छिन् । सन्तुले त्यो तरकारी देखेर आमालाई बिस्तारै आमा म भात खादिनँ भनेर भन्छ । आमाले सन्तुलाई किन नखाने भात ? भेनेर प्रश्न गर्छिन् । सन्तुले मुख बिगार्दै, तपाईलाई थाहा छैन, मैले तिते करेला र चिप्ले भिन्डीको तरकारी मन पर्दैन भनेर भन्छ । आमाले पुन: सन्तुलाई प्रश्न गर्छिन्, “किन नखाने मलाई थाहा छैन ।” सन्तुले झर्किदै आमालाई भन्छ, “तितो र चिप्लो हुन्छ, त्यसैले मन पर्दैन ।”
उता तिते करेला र चिप्ले भिन्डीले सन्तु र सन्तुको आमाले गरेको कुरा सुनिरहेको हुन्छ । सन्तुले चिप्लो र तितो हुन्छ भनेको सुनेर तिते करेलाबिच संवाद सुरु भयो :
तिते करेलाः तँ त चिप्लो हुन्छ रे हो ?
चिप्ले भिन्डीः अह ! म चिप्लो भएर के भो त ? तँ त झन खानै नसक्ने तितो हुन्छ रे । तँ तिते हाहाहा…….। (चिप्ले भिन्डी हाँस्छ ।)
(तिते करेलालाई चिप्ले भिन्डीको कुरा सुनेर रिस उठ्छ र मलाई तिते भन्ने भनेर झगडा गर्न थाल्छ ।)
तिते करेलाः म त तिते भएँ । त नि त झुसे हो । तेरो शरीरभरि झुसैझुस छ, तँ झुसे मलाई मात्र तिते भन्छस हाहाहा… । (तिते करेला पनि हाँस्छ । चिप्ले भिन्डीलाई तिते करेलाको कुरा सुनेर झन रिस उठ्छ र यसले मलाई झुसे भन्ने भनेर ठूलो स्वरले कराउदै भन्छ ।)
चिप्ले भिन्डीः तँ तितेले मलाई झुसे भन्ने तेरो पनि शरीर भरि काँडै काँडा छ । तँ तिते मात्र होइन काँडे पनि होस । (तिते करेलाले पनि झन जङ्गिदै भन्छ । )
तिते करेलाः ए झुसे ! म तिते र काँडे भए पनि के मतलब तँलाई । मलाई त मानिसहरुले पकाएर खान्छन् ।
चिप्ले भिन्डीः अ तिते ! खुबै तँलाई मात्र खान्छन् मानिसहरुले मलाई पनि मज्जाले पकाएर तरकारी र उसिनेर औषधीको रुपमा पनि खान्छन् भन्ने कुरा नबिर्सि । मलाई किन खान्छ भनेर सोध्न बरु ? (तिते करेला एकछिन चिप्ले भिन्डीको ‍कुरा सुनेर अलमलिन्छ र सोच्छ, अँ है किन खान्छ होला मानिसहरुले ? सोध्नु पर्यो भनेर सोध्छ । )
तिते करेलाः ल ल भन् त किन खान्छन् मानिसहरुले तँलाई ?
चिप्ले भिन्डीः सुन ! मलाई खायो भने मानिसहरुको स्वास्थ्य र सैन्दर्यमा फाइदा पुर्‍याउछ । ममा प्रोटिन, क्यालसियम, बोसो, कार्बोहाइड्रेड, सोडिययम, फलाम र फोस्फोरस गरी ममा सात प्रकारको गुण भएको हुनाले खान्छन् । (तिते करेलाले चिप्ले भिन्डीको कुरा टुङ्गिन नपाउदै भन्छ ।)
तिते करेलाः ओहो ! तैँले मात्र मानिसहरुको स्वास्थ्य र सैन्दर्यमा फाइदा पुर्‍याउछस् भन्ने सोचेको मैले पनि पुर्‍याउछु नि मानिसहरुको स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा फाइदा । तँलाई थाहा छैन होला तेरोभन्दा मेरा गुणहरु धेरै छन् भनेर ? ममा प्रोटिन, क्याल्सियम, फोस्फोरस, आइरन, भिटामिन ‘ए’, भिटामिन ‘सी’, केरोटिन, ग्लुकोलाइड, सेपोनिन्, एल्केलाइ र लिटर्स गरी ममा एघार प्रकारका गुणहरु पाइन्छ । म तितो र काँडे भएपनि ममा धेरै गुणका कारणले मलाई मानिसहरुले पकाएर मात्र होइन, धुलो र रस बनाएर पनि खान्छन् । चिप्ले भिन्डीले मनमनै, हो त यसको त एघार प्रकारको गुण छ मेरो त जम्मा सात प्रकारको मात्र छ भनेर सोच्छ र मसिनो स्वरमा कुरा गर्न थाल्छ :
चिप्ले भिन्डीः मैले मानिसहरुको आन्द्रामा हुने कोलोन क्यान्सर फैलनबाट बचाउँछु, रगतमा हेमोग्लोबिन निर्माण गर्छु, एनिमियाबाट बचाउछु र रक्तश्राव रोक्न सहयोग पुर्‍याउछु । अनि सौन्दर्यमा लामो केश, कालो र बाग्लो बनाउन र शरीरमा रहेको बोसो वा मोटोपन नियन्त्रण गर्ने गर्छु । तैँले के गर्छस् ?
तिते करेला (एकछिनसम्म सोचेपछि) : भोभो धैरै फुँई लगाउनु पर्दैन । मैँले पनि मधुमेहबाट समस्यामा पारेका, जन्डिसका बिरामीको समस्या, पत्थरीको समस्या, पेटमा जँकाको कारण पेट दुखाइको समस्या, हाड जोर्निको समस्याहरुको निराकरण गर्न र पिसाव सफा राख्ने जस्ता कार्य गर्छु । मानिसहरुको अनुहारको दाग र पोतो हटाउन, रगत सफा राख्न, छाला जवान र चम्किलो राख्ने जस्ता सौन्दर्यको काम गर्छु, बुझिस् ?
(चिप्ले भिन्डीले तिते करेलको गुण र कार्य साचिकै धेरै नै छ, अब योसँग झगडा गरेर काम छैन भनेर एउटा चलाखिपन अपनाउछ र हामी मिल्नुपर्छ भनेर भन्छ । )
चिप्ले भिन्डीः ल ल भैगो आबो धेरै झगडा गर्नु हुन्न हामीले, मानिसहरुले हामी दुबैलाई मिसाएर पनि तरकारी खान्छन् । हामीले यो कुरा बिर्सनु हुदैन । हामी मिल्नुपर्छ । (चिप्ले भिन्डीले भनेको कुरा तिते करेलाले नकार्न सक्दैन र भन्,
“हो त बेकारमा हामीले झगडा गर्नु हुन्न । मानिसहरुको लागि हामी दुबै जना बहु-उपयोगी छौँ ।” (त्यसपछि तिते करेला र चिप्ले भिन्डी मिलेर बस्छन् ।)
यता सन्तु र सन्तुको आमा तिते करेला र चिप्ले भिन्डीको कुरा सुनेर दङ्ग पर्छन् । अनि सन्तुले मनमनै, ओहो यति धेरै फाइदा हुदो रहेछ । तिते करेला र चिप्ले भिन्डीको तरकारी खायो भने भनेर भन्छ र सन्तुले अघि खादैन भनेको तरकारी आमालाई नरम स्वरमा भन्छ,”आमा अघिको मेरो भात र तरकारी खै ? दिनुस् न ।” सन्तुकी आमाले त्यो खाना खुसी हुदै दिन्छिन् र सन्तुले भात, तिते करेला र चिप्ले भिन्डीको तरकारी मिठो मानी मानी खान्छ ।
कथाकार युरिका सिङ्जाली मगरलाई सामाजिक स‌ंजालमा भेट्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
कविता- मातृभाषाप्रतिको राजनीति छोड सरकार !
कविता – मिठो भ्रम
कविता- बहिरो चेपागाँडा
‘संशोधन प्रस्तावलाई अतिरञ्जित नगर्न एमालेलाई चेतावनी’
रुपन्देहीमा अझै नियन्त्रणमा आएन फौजी किरा
अवैध सम्बन्ध लुकाउन प्रहरी हवल्दारद्वारा परस्त्रीको हत्या
पूर्वराजाबाट जफत साढे २१ हजार रोपनी जग्गा संरक्षण गर्ने नेपाल ट्रस्टको बोर्डमा यती समूहका सञ्चालक